Gabaasa tarkaanfii WBO guutuu Oromiyaa keessaa kan guyyaa kaleessaa! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooGabaasa tarkaanfii WBO guutuu Oromiyaa keessaa kan guyyaa kaleessaa!
Gabaasa tarkaanfii WBO guutuu Oromiyaa keessaa kan guyyaa kaleessaa!
Gabaasa tarkaanfii Waraana Bilisummaa Oromoo WBO guutuu Oromiyaa keessaa kan guyyaa kaleessaa!
Hagayyaa 8, 2021
Waraanni Bilisummaa Oromoo WBO’n Godina Gujii keessatti magaalaaleef baadiyyaa dhuunfachuu, Oromiyaa kutaa addaa addaa keessatti tarkaanfii itti fufe jiraachuu hime.
Gabaasa Keelloo Miidiyaan argateen waraanni Bilisummaa Oromoo WBO’n Kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Roobii keessatti magaalaa dhuufachuun tohannaa isaa jala galchuu suir-sagalee yookan Vidiyoo waraabee lakkiseen agarsiisee jira.
WBO’n haleellaa qaamolee mootummaaf waraana isaanii irratti fudhachaa jiru jabeessuun, injifannoowwan gurguddaa galmeessaa jiraachuu itti fufuu isaa mirkaneessaa jira.
Achuma Kibba Oromiyaa godina Gujii Bahaa aanaa Liiban ona Dhakaa Qallaattii jedhamutti Kaambii waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa irraan gahuu beeksiseera. Tarkaanfii har’a Hagayya 7,2021 fudhate kanaan humna waraanaa mootummaa ajjeesuuf miidhaa ulfaataan irraan gahuu WBO’n beeksisee jira.
Akkasuma guyyaa har’aa WBO’n Kaambii waraanaa mootummaa kan Kaaba Shaggar aanaa Dagam ganda Yaayyaa Haroo keessatti argamu haleeluun waraana mootummaa nannichaa ari’ee baasuu isaa beeksiseera.
Onuma Salaalee keessaa magaalaaleen Ulaa Uummoo fi Alii Dooroo jedhaman halkan edaa WBO’n dhuunfatamuu Keelloon odeeffatee jira.
Salalee guutummaan dhuunfachuuf haleellaa gaggessaa jiraachu hima waraanni Bilisummaa Oromoo. WBO’n tarkaanfii har’a Hagayya 7,2021 Salaalee ona Kuyyuu irratti ganamaa qabee guyyaa kana gaggeessaa tureen waraana mootummaa 60 ol ajjeesuun baayyolii isaanii madeessee kaan baqatee utuu fiiguu hallayyaatti nam’uu isaa himeera. Ona Kuyyuu keessatti meeshaa waraana hedduu galii qabsoo Bilisummaa Oromoof oolchuu kan hime WBO’n, Bkm 1, Qawwee AKM 20 fi rasaasa lakkoofsaan hedduu ta’an hiikkachuu ibseera.
Achuma Salaalee ona Dagam irratti tarkaanfii WBO’n har’a fudhateen 15 ol ajjeesee madoo patiroolii Kuyyuu gara Fiicheetti qaamni mootummaa fe’achuu beeksise. Konkolaatotaaf meeshaa waraanni mootummaa dhimma itti bahu kan isa hin fayyadne hedduus onicha keessaa abiddaan barbadeessuu WBO’n ibsee jira.
Gabaasa WBO’n baasaa jiruun daandiin Kaaba Itoophiyaa seenu Oromiyaa Salaalee keessa darbu dhibbantaa hedduun WBO’n qabamee jiraachuun ibsameera.
Salaalee ona Warra Jaarsoo keessattis waraana mootummaa hedduu ajjeesuun Qawwee AKM 50 ol waraana mootummaa irraa hiikkachuu WBO’n beeksise.
Tarkaanfiiwwan Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti gaggeessaa kan jiru WBO’n, Lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Limmuu Galiilaa, akkasuma aanaa Nuunnuu Qumbaa jalaa bakkoota hedduu dhuunfatee jiraachuu WBO’n zoonii Lixaa beeksiseera. Aanaa Nuunnuu Qumbaa ganda Hora Baacaa jedhamutti WBO har’a Hagayya 7,2021 tarkaanfii laalessaa fudhachuu isaa beeksiseera.
Torban kana aanaa Nuunnuu Qumbaa bakka addaa Birinqaas jedhamutti humna waraanaa mootummaa hedduu isaanii ajjeesuuf bakka sanaas ari’ee baasuun gabaafamee jira.
Haaluma wal fakkaatuun WBO’n Zoonii Lixaa guyyaa kaleessaa Hagayya 6,2021 tarkaanfii Qellem Wallaggaa aanaa Yaamaaloogii Walal ganda Gurraattii Walalla bakka addaa Molee jedhamutti fudhateen waraana mootummaa hedduu ajjeesuuf madoon adabuu beeksisee jira.
Tarkaanfii WBO kan gama Kibba bahaa Oromiyaa arganneenis qaamolee waraana mootummaa hedduu isaanii haleeluun himame.
Haala kanaan WBO’n Kibba baha Oromiyaa godina Baalee keessatti haleellaa fudhateen waraana mootummaa 56 ajjeesuun meeshaa waraanaa hedduu irraa hiikkachuu beeksiseera. Meeshaa waraanaa AKM 16 waraana mootummaa irraa hiikkachuus ibsee jira
Ethiopia: TDF, Debre Tabor and Demeke Mekonen